Taariikhda My Butros » Ma uu shukaansi Kula? Fiirsado calaamadahaan!
Ma uu shukaansi Kula? Fiirsado calaamadahaan!
Last updated: Sep. 17 2020 | 3 min akhri
Ma leedahay nin aad xiisaynayso laakiin aanad hubin of dareenkiisa? Ever helay naftaada ka yaabban waxa ay tahay marka uu sameeyaa waxyaabo gaar ah ama u dhaqmo si gaar ah? Ever yaabay taas oo ka mid ah calaamadahaan aad u baahan tahay in aad iska eegto in la ogaado haddii uu run ahaantii waxaa shukaansi aad la?
Haddii aad jawaabay Ishaku in su'aalo oo dhan, markaas u badan tahay waxaad u baahan tahay talooyin dhowr kaa caawinaya in aad dhexsocoto iyo ogaato haddii uu dhab ahaantii waa inaad galay.
Ma wuxuu xidhiidh la sii isha?
Haddii nin inaad la hadlaysid haysaa xiriirka indhaha muddo dheer, markaas in uu noqon karaa calaamad u tahay in uu soo jiitay in aad sida ugu fiican u. Si kastaba ha ahaatee, guys xishood ay sidoo kale qaban karo xiriirka indhaha, wallow muddo gaaban.
Waxa uu ahaa in guduudayn ah?
Ha ka qaadista nin ka xishood sida dhowaan karin. Haddii uu blushes mar kasta oo aad ku xeeran yihiin, ka dibna waxaa jira aad ka eheyn in ay bilaabaan wada hadal iyo ka caawin nin ka soo madaama uu la dhimanayaan laga yaabaa inay kula hadlaan. Xataa guys kuwaas oo aan ka xishoon, camankaa waxaa hubaal ah calaamad fiican u soo jeedinno ah in khiyaano xiisaha uu aad ee.
Ma neerfaha uu la wareegay?
Ever la yaabay sababta nin in had iyo jeer u muuqataa deganaan la'aan marka aad ku xeeran? Well, waxaa laga yaabaa in aysan mar walba sababtoo ah waxa uu doonayaa inuu ka tago. Kuwaasu waa neerfaha uu la wareegay kaliya inuu isku dayo inuu soo duuboo geesinimada inuu kula hadlo.
Ma suunniyadaba sara kiciyey,?
Inkastoo nin in xiiseyneyso aad ee isku daya inay qarsan indhihiisa, marka laga hadlayo in aad, haddii uu u kiciyo suunniyadaba indhaha lugeedyo, markaa taa waa calaamad u tahay in uu shukaansi aad la.
Ma isagoo copycat ah?
Tani waa xaqiiqo dhab ah oo aad u xiiso badan. Haddii uu shukaansi aad la, uu isag oo minguuriyaan waxa aad samaynayso. Ma isku aragtay in mar kasta oo aad guurto aad gacanta iyada oo timahaaga, wuxuu gacanta ku soo guuro oo uu timo aad u? Ama xitaa marka aad dhiiga lugta, uu sameeyo? Waa sixir ee ku baaqaya, oo intaasuna waa qaar ka mid ah calaamadaha aad u baahan tahay in aad iska eegto.
Waa inuu madaxiisa ma lagu beego?
Weligaa ogaaday nin in garkooda madaxiisa idiinla macaamiloodaa sida aad hadlo isaga? Waxaa dhab ahaantii ka dhigan tahay inuu aad u jecel yahay oo waa adoo u digtoon, si aanay u seego wax kasta oo aad odhanayso.
Ma jiraa dhoola ku ciyaarayaan bushimihiisa?
Nin A oo danaynaya aad ee dhoola doonaa inaad ee sida calaamad u tahay in uu doonayo in uu kula hadlo. Sidaa darteed, waxay qaadan sidii an ku yeedhi xagga hadalka lagu bilaabo.
Ma wuxuu istaagi akimbo?
Nin A oo soo jiidatay in aad isku dayi doono inuu ku muujiyaan in ay yihiin is-Eebayna la gacmaha kaalinta on miskaha ka taagan, ama xataa suul yeellay siddooyin uu suunka. Calaamad Tani waxaa laga yaabaa in aanay noqon in Cad, laakiin waxay noqon karaan dariiq ah.
Ma ardayda uu balaartay?
Ma ogtahay in haddii aad rabto inaad qof, ardayda waan ballaadhin iyo haddii aadan, ay heshiis? Iyadoo tan maskaxda, oo aad u baahan tahay inaad samayso waa eegto hortiisa ku ahaa sidii aad qabto wada hadal. Haddii ay weyneyso, markaasaad garan inuu xiiseynayo.
Ma uu kaliya ku taabto?
Miyuu nin ee abid idin siiyey taabasho jilicsan, xataa sida uu ag maraaba? Markaasuu hubaal waa xiiseeyo waxana doonayo in lagu soo qabto inaad fiiro. Si kastaba ha ahaatee, daawato baxay kuwa gurguurta oo waa, sidoo, kaliya gurguurta oo doonaya inuu u ciyaaro agagaarka in xiriir. Waad ogtahay waxa aan ula jeedo, aadan sameyn?
Tan iyo hadda in aad fahanto Aayaadka si ay u eegto in ay dhakhso u ogaadaan haddii uu shukaansi aad la, waa waqti ay qaadato dibiga by geesaheeduna. Ha u ogolaan fursad aad u gudbin by!
Ma Dating Online Wixii khasaaray?
Tips for Dating Iyadoo shootali oo Apps kale Mobile
Ku celiska aheyd – Ma shukaansiga online si sax ah si ay u tagaan?